Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacay KARIN Boosaaso.(FAAHFAAHIN). | Halganka Online
Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacay KARIN Boosaaso.(FAAHFAAHIN).
Posted on Luulyo 26, 2010 by halganka
Dagaalkii kululaa ee u dhexeeyey Shacabka Galgala iyo ciidamada Puntland ayaa soo gabagaboobay waxyar ka hor ayada oo dagaalkii maanta dhacay looga itaal roonaaday ciidamada Puntland.
Dagaalkan ayaa waxaa soo qaaday Shacabka Galgala ka dib markii ciidamada Puntland ay go’doon dhowr maalmood qaatay saareen magaalada Galgala iyo tuulooyinka yar yar ee ku xeeran.
Saaka waaberigii ayey ciidamadii ku sugnaa degaanka Galgala oo muddo bilooyinka ah tababaro noocyada kala gadisan ah ku qaadanayey deegaanadaas ku soo qaadeen saldhig ay ku lahaayeen ciidamada Puntland meel u dhow tuulada KARIN oo qiyaastii 30 KLM u jirta magaalada Boosaso.
Daqiiqadihii ugu horeeyeyba ciidamada degaanka Galgala waxa ay fooda ku qaateen ciidamadii Puntland waxana ay soo gaarsiiyeen jab aad u balaaran oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ciidamada Puntlnad ayaa gurmad aad u balaaran waxa uu uga yimid magaalada Boosaaso iyo Tuulada Carmo oo ay ku taalo xero aad u weyn oo lagu tababaro waxa loogu yeero Booliska Soomaaliyeed.
Dagaalkii ayaa dib u bilowday waxaana markale la soo jabiyey ciidamadii Puntland ee gurmadka ku yimid.
Ciidamada PIS-ta ee loo yaqaano Ashahaado la dirirka ayaa ayaga oo aad u xoogan waxa ay ku soo biireen dagaalka hase yeeshee ciidamadii degaanka Galgala oo ayagu goor aan fogeyn ku dhawaaqay ku dhaqanka shareecada Islaamka ayaa jilbaha u aasay dagaalkan aysan u kala harin ciidamadii Puntland iyo Ashahaada la dirikoodii.
Waxyar dagaalku markii uu socday ayey ciidamada Galgala waxa ay gubeen laba gaari oo Cabdi Bilayaal ah oo ay saarnaayeen Qoryaha dhishiikaha sidoo kale waxaa ciidamdii Ashahaado la dirirka ahaa god uga dhacay laba gaari oo ah nooca Soomaalidu u taqaano Candho Meydlaha oo ay saarnaayeen Saadkii ciidamada Ashahaado la dirika.
Ciidamadii Puntland iyo Ashahaado la dirirkii ayaa dhabarka jeediyey waxayna Shacabka reer Galgala oo ayagu goobtii ku haray ay furteen qoryihii Dhishiikayaasha ahaa sidoo kale waxa ay horay u sii qaateen wixii raashin ahaa ee saarnaa Baabuurtii godka ku dhacday waxana ay goobtii ku gubeen afartii gaari oo ka dibna halkaas ku bas belay.
Magaalada Boosaaso ayaa ah maanta mid aad u kacsan waxaana laga dareemayaa is dhex yaac iyo jahawareer baahsan.
Waxaa magaalada la keenay dhaawac iyo dhimasho aad u fara badan waxaana askartii dhaawaca ahayd la geeyey Isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso iyo Puntland Hospistal oo asagu ah mid si gaar ah loo leeyahay.
Isku soo wada duuboo dagaalkii maanta ka dhacay KARIN ayaa ahaa mid uu jab weyn ka soo gaaray ciidamada Puntland iyo Ashahaada la dirirkoodu lamana garanayo tilaabada middan ku xigta ee uu qaadi doona Faroole maadaama jab balaaran la soo gaarsiiyey ciidamadii uu ku goodiyey in uu Galgala iyo Shareecadeeda Islaamka ahba ku weerari doono.
« Xukuno isugu jira Xad iyo Tacziir oo maanta lagu fuliyay Degmada Huriwaa ee Magaalada Muqdisho. Xoogaga deegaanka Galgalo oo gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkii maanta iyo Laag iyo Karin oo lala wareegay. »